Naloxone (နာလိုဇုန်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Naloxone (နာလိုဇုန်း)
Naloxone (နာလိုဇုန်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Naloxone (နာလိုဇုန်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Naloxone (နာလိုဇုန်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Naloxone ကို မူးယစ်ဆေးလွန်ခြင်း သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးလွန်သည်ဟု သံသယရှိသော လူနာများတွင် အရေးပေါ်ကုသမှုအဖြစ် အသုံးပြုပါသည်။ မူးယစ်ဆေး အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏ လက္ခဏာများမှာ အလွန်အမင်း အိပ်ငိုက်ခြင်း၊အလွန်အမင်း ထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊အိပ်ပျော်နေရာမှ အလွန်နှိုးရခက်ခြင်း၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ (အသက်ရှုနှေးခြင်း၊အသက်ရှုအားနည်းခြင်း မှ အသက်ရှုလုံးဝရပ်သွားခြင်း) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ အခြားသော လက္ခဏာများမှာ သူငယ်အိမ် အလွန်ကျဉ်းခြင်း၊နှလုံးခုန်နှေးခြင်း၊ သွေးပေါင်ကျခြင်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ကြာရှည်စွာ အသက်ရှုနှေးခြင်း၊အသက်ရှုအားနည်းခြင်းသည် ဦးနှောက်ကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေပြီး အသက်အန္တရာယ်အထိ ရှိနိုင်သဖြင့် အကယ်၍ တစုံတယောက်သည် မူးယစ်ဆေးလွန်သည့် လက္ခဏာများရှိနေပြီး သင့်အနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးလွန်ခြင်းဟုတ်မဟုတ် မသေချာသည့်တိုင် Naloxone ကို ကျိန်းသေပေါက်ပေးသင့်ပါသည်။
Naloxone သည် မူးယစ်ထုံထိုင်းဆေးများကို ဆန့်ကျင်သည့် အာနိသင်ရှိသော ဆေးအုပ်စုဝင် ဆေးတမျိုးဖြစ်သဖြင့် ၎င်းသည် မူးယစ်ထုံထိုင်းဆေးများ၏ ဦးနှောက်အပေါ် သက်ရောက်သော အာနိသင်များကို ပိတ်ဆို့ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ သို့သော် အချို့သော မူးယစ်ထုံထိုင်းဆေးများ(ဥပမာ။ ။buprenorphine ၊ pentazocine )တို့၏ အာနိသင်ကိုမူ ကောင်းစွာ တားဆီးပိတ်ဆို့ပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ထိုမူးယစ်ဆေးများ၏ အာနိသင်ကို တားဆီးပတ်ဆို့ဖယ်ရှားလိုလျင် ပုံမှန်ထက်ပိုများသော Naloxone ဆေးပမာဏကို လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Naloxone သည် မူးယစ်ထုံထိုင်းဆေးများကဲ့သို့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အာနိသင်သက်ရောက်ခြင်း မရှိသဖြင့် Naloxone တခါထိုးပြီးနောက် အခြားသော အရေးပေါ်ကုသမှုများကို အလျင်အမြန် ရရှိရန် အလွန်အရေးကြီးလှပါသည်။ မူးယစ်ဆေးလွန်ခြင်းကို ကုသရာတွင် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ကုသမှုများ (နှာခေါင်းပိုက်မှတဆင့် အောက်ဆီဂျင်ပေးခြင်း၊စက်ဖြင့် အသက်ရှုစေခြင်း စသည်)လည်း ပါဝင်သင့်ပါသည်။
Naloxone (နာလိုဇုန်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးကို စတင်အသုံးမပြုခင် သို့မဟုတ် ဆေးကုန်သွား၍ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တိုင်းတွင် ဆေးဆိုင်မှ ပေးလိုက်သည့် ဆေးညွှန်းစာရွက်ကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုပါ။ အရေးပေါ်လိုအပ်လျှင် ချက်ချင်းသုံးနိုင်ရန် အသင့်ဆောင်ထားပါ။ လိုအပ်သည့် အချိန်တွင် အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် စနစ်တကျမှန်ကန်စွာ ဆေးထိုးပုံ နှင့် ဆေးထိုးသည့် ကိရိယာ အသုံးပြုပုံကို ကြိုတင်၍ လေ့ကျင့်ထားပါ။ မရှင်းလင်းသည်များရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။
ဆေးရည်သည် အစဉ်အမြဲ ကြည်လင်နေရမည်။ အမှုန်များပါဝင်ခြင်းရှိမရှိ နှင့် အရောင်ပြောင်းသွားခြင်းများရှိမရှိကို အချိန်မှန်မှန်စစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ဆေးရည်သည် အရောင်နောက်သွားလျှင်၊အရောင်ပြောင်းသွားလျှင် သို့မဟုတ် အမှုန်၊အခဲလေးများ မြင်နေရလျှင် အသုံးမပြုရပါ။
ဤဆေးကို မတော်တဆ မိမိလက်အား ထိုးမိခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်မှလွဲ၍ အခြားသော ခန္တာကိုယ်နေရာများကို ထိုးမိခြင်းမရှိစေရန် အထူးသတိထားရပါမည်။ အကယ်၍ အဆိုပါ မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါက ဆရာဝန်ထံ အမြန်သွားပြီး လိုအပ်သော ကုသမှုများကို ခံယူပါ။
Naloxone သည် အာနိသင် လျှင်မြန်စွာပြသော်လည်း အဆိုပါ အာနိသင်သည် ကြာရှည်မခံပါ။ ထို့ကြောင့် Naloxone တခါထိုးပြီးနောက် (လူနာ သတိပြန်လည်လာလျှင်ပင်) အခြားသော အရေးပေါ်ကုသမှုများကို အလျင်အမြန် ရယူရပါမည်။ အကယ်၍ Naloxone တခါထိုးပြီးနောက် လက္ခဏာများ တဖန်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာပါက ကိရိယာ အသစ်ကို အသုံးပြုပြီး (ဆေးလုံလောက်စွာ ရှိသေးလျှင်) ၂မိနစ်တခါ သို့မဟုတ် ၃မိနစ်တခါ ထပ်မံထိုးနိုင်ပါသည်။ ဆေးထိုးသည့် injector တွင် Naloxone တခါထိုးစာသာ ပါဝင်ပြီး တခါသုံးဖြစ်ပါသည်။ အရေးပေါ်ကုသမှု ရရှိချိန်အထိ လူနာကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ကုသသည့် အဖွဲ့ရောက်ရှိလာလျှင် သင် Naloxone ထိုးထားပေးကြောင်း ပြောပြပါ
Naloxone (နာလိုဇုန်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Naloxone ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Naloxone ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Naloxone ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Naloxone ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Naloxone ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Naloxone (နာလိုဇုန်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Naloxone ထိုးဆေးကို အသုံးမပြုမီ
-သင်သည် Naloxone ထိုးဆေး သို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများ သို့မဟုတ် Naloxone ထိုးဆေးတွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ ရှိပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်ပြောပြပါ။Naloxone ထိုးဆေး၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သိရှိနိုင်ရန် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ကို မေးမြန်းပါ။
-သင်လက်ရှိ သုံးစွဲနေသော ဆေးများ သို့မဟုတ် သုံးစွဲရန် အစီအစဉ်ရှိသည့် ဆေးများ (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေး၊ မိမိဖာသာ သောက်သည့်ဆေး၊ဗီတာမင်အားဆေး၊သဘာဝအားဖြည့်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်)ကို သင့်ဆရာဝန်အား သေချာစွာ ပြောပြပါ။ အောက်ပါ ဆေးများကို သုံးစွဲနေပါက ဆရာဝန်ကို မမေ့မလျော့ ပြောပြပါ။ နှလုံးနှင့် သွေးဖိအားအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် ဆေးများကြောင့် Naloxone ၏ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပို၍ ခံစားရစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သုံးစွဲနေသော ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်အား သေချာစွာပြောပြပါ။
-သင့်ထံတွင် နှလုံး၊ကျောက်ကပ် သို့မဟုတ် အသည်းရောဂါများ ရှိပါက ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
-ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်တွင် Naloxone ထိုးဆေးဖြင့် ကုသမှု ခံယူရပါက ဆရာဝန်အနေဖြင့် သင့်ဗိုက်ထဲရှိ ကလေးငယ်ကို သေချာစွာ စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Naloxone (နာလိုဇုန်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Naloxone (နာလိုဇုန်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
-ပြင်းထန်စွာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊စိတ်တိုစိတ်ဆတ်ခြင်း၊စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်များခြင်း၊စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊နားထဲတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော အသံများကြားနေခြင်း။
အကယ်၍ သင်သည် မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းအတွက် ကုသမှုခံယူနေရခြင်း ဖြစ်ပါက အောက်ပါ ဆေးဖြတ်လက္ခဏာများကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Naloxone (နာလိုဇုန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Naloxone ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့်
-Morphine Sulfate Liposome
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Naloxone (နာလိုဇုန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Naloxone က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Naloxone (နာလိုဇုန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Naloxone ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
-အသည်းရောဂါ ——> သတိဖြင့်အသုံးပြုပါ။ ခန္တာကိုယ်ထဲမှ ဆေးစွန့်ပစ်မှုကို နှေးစေသဖြင့် ဆေး၏အာနိသင်မှာ ခန့်မှန်းထားသည်ထက် များလာနိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Naloxone (နာလိုဇုန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
-0.4 – 2mg/dose ကို အသားထိုးဆေး/အကြောထိုးဆေး/အရေပြားအောက်ထိုးဆေး စသဖြင့် ထိုးနိုင်ပြီး လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ၂မိနစ်ခြား ၃မိနစ်ခြားစသည် ထိုးနိုင်သည်။ စုစုပေါင်း ၁၀ မီလီဂရမ် ထိုးပြီးသည်အထိ သိသာသော တုန့်ပြန်မှုမရှိလျှင် တဖန်ပြန်ပြီး စမ်းစစ်သင့်သည်။
ထိုးဆေး ဆက်တိုက်ပေးထားရန် ပမာဏ —–> 0.005mg/kg ကိုဦးစွာထိုးပြီးနောက် 0.0025mg/kg/hr ဖြင့် ဆက်လက်ပေးထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Naloxone (နာလိုဇုန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သွေးထဲတွင် မူးယစ်ဆေး ပမာဏများပြားစွာရှိနေခြင်း :
အကြောသွင်းဆေး (ဦးစားပေး) သို့မဟုတ် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီထဲ တိုက်ရိုက်ထိုးထည့်ခြင်း : (သတိပြုရန်မှာ ဆေးကို အသားထိုးဆေး၊အရေပြားအောက်ထိုးဆေး သို့မဟုတ် နှာခေါင်းပိုက်များမှတဆင့်လည်း ပေးနိုင်သော်လည်း ဆေးအာနိသင်သက်ရောက်ရန် အချိန်ကြာပါလိမ့်မည်(အထူးသဖြင့်လူနာ၏ သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းတော့သည့် အခြေအနေမျိုးတွင်)။ အကယ်၍ အကြောသွင်းဆေး သို့မဟုတ် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီထဲ တိုက်ရိုက်ထိုးထည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် အခြေအနေမပေးလျှင် နှာခေါင်းပိုက်သည် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးကို ထပ်ခါတလဲလဲပေးရန် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
အသက် ငါးနှစ်အောက် ကလေးများ သို့မဟုတ် ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ကီလိုအောက် ကလေးများ : 0.1mg/kg/dose။ လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ၂မိနစ်ခြား ၃မိနစ်ခြားစသည် ထိုးနိုင်သည်။ ဆေးပမာဏကို မိနစ်၂၀ခြား မှ မိနစ်၆၀ကြားထိ ထပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
အသက် ငါးနှစ်အထက် ကလေးများ သို့မဟုတ် ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ကီလိုအထက် ကလေးများ နှင့် ဆယ်ကျော်သက်များ : 2mg/dose။ ဆေးကို တုန့်ပြန်မှု မရှိလျှင် ၂မိနစ်ခြား ၃မိနစ်ခြားစသည် ထိုးနိုင်သည်။ ဆေးပမာဏကို မိနစ်၂၀ခြား မှ မိနစ်၆၀ကြားထိ ထပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
နှာခေါင်းပိုက်နှင့် ပေးခြင်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံးသော ဆေးပမာဏကို မသိရှိရပါ။ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အလိုအရ နှာခေါင်းပိုက်ဖြင့်ပေးလျှင် အကြောထိုးဆေးသွင်းသည့် ပမာဏ၏၂ဆ သို့မဟုတ် ၃ဆခန့် ပေးသင့်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဆေးထုတ်လုပ်သူများ၏ အကြံပြုချက် : အကြောသွင်းဆေး (ဦးစားပေး) ၊အသားထိုးဆေး၊အရေပြားအောက်ထိုးဆေး :
ကနဦးဆေးပမာဏ : 0.01mg/kg/dose။ အကယ်၍ တုန့်ပြန်မှုမရှိလျှင် 0.1mg/kg ထပ်ပေးနိုင်သည်။
(မှတ်ချက်။ ။ အသားထိုးဆေး သို့မဟုတ် အရေပြားအောက်ထိုးဆေး အဖြစ်အသုံးပြုလျှင် ဆေးပမာဏကို တခါတည်းမပေးဘဲ ခွဲပေးရမည်။
ကလေးများ : ဆက်တိုက်အကြောသွင်းဆေး သွင်းရန်လိုအပ်ပါက မူလအသုံးပြုခဲ့သော ဆေးပမာဏ နှင့် လုံလောက်သော တုန့်ပြန်မှုကို ပြသည့် အချိန်အတိုင်းအတာတို့ပေါ်မူတည်ပြီး တနာရီလျှင် ပေးရမည့် ကနဦးဆေးပမာဏကို တွက်ချက်ရမည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် 2.5 – 160 mcg/kg/hr နှုန်းများဖြင့် ပေးလေ့ရှိပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများ တဖန်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ဆေးပမာဏကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့သွားပြီးမှ ရပ်ပါ။
[Opioid ကို ဆေးကုရာတွင်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်(ဥပမာ။ ။ မေ့ဆေးပြယ်ပြီး အခြေအနေ)] အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းအတွက်
PALS Guidelines ,2010အရ : 0.001 – 0.005 mg/kg/dose ပမာဏဖြင့် ပေးရမည်။ ဆေးအာနိသင်ပြမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးပမာဏကို ချိန်ဆရမည်။
ဆေးထုတ်လုပ်သူများ၏ အကြံပြုချက် : ကနဦးဆေးပမာဏ —-> 0.005 – 0.01 mg/kg ။ ဆေးအပေါ်တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်၍ ၂မိနစ်ခြား ၃မိနစ်ခြားစသည် ထိုးနိုင်သည်။
Opioid ကြောင့်ဖြစ်သော ယားယံခြင်း
ကလေးများ နှင့် ဆယ်ကျော်သက်များ : လုံလောက်သော အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ။
Naloxone (နာလိုဇုန်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Naloxone ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Naloxone ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Naloxone injection https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612022.html.Accessed July 14, 2016.
Naloxone https://www.drugs.com/naloxone.html. Accessed July 14, 2016.